Keydso Tamarta Guriga - Xarunta EcoTechnology
Keydso Tamarta GurigaLarry Daniele2022-05-26T12:55:11-04:00
Ku keydi tamarta gurigaaga
Noqo Raaxo Badan
Gurigaaga Ka Dhig Mid Tamar Badan
Dhis Guriga Waxqabadka Sare
waxay ku furantahay daaqad cusubAdeegyada La-talinta Kuleylka
Next Zero (Hore u HELPS) Macaamiisha
Gaaska Westfield + Macaamiisha Korontada
1-888-333-7525wuxuu furayaa wacdi taleefan *
NextZero, oo hore loogu yiqiin HELPS (Adeegyada Ka Hortagga Tamarta Waayida Guriga), waxa bixiya Shirkadda Korantada Jumladda ee Dawladda Hoose (MMWEC).
NextZero waxay bixisaa waxbarashada tamarta, xisaabinta tamarta guriga, kaalmaynta hagaajinta tamarta guriga, iyo ENERGY STAR qiimo dhimis qalabka macaamiisha tamarta ee magaalooyinka soo socda:
Ashburnham, Boylston, Chicopee, Groton, Holden, Holyoke, Hull, Ipswich, Marblehead, Paxton, Peabody, Princeton, Russell, Shrewsbury, South Hadley, Sterling, Templeton, Wakefield, iyo West Boylston
U qalmida hagaajinta tamarta guriga waxaa ka mid noqon kara:
Qufulka hawada iyo daboolka
Kuleyliyaha kuleylka badan, qaboojinta, iyo qalabka kululeynta biyaha
Heerkulbeegyada karti la'aanta ah
Mashaariic cusub oo dhisme iyo xiidmo-rehab ah
Wi-fi qalabaysan kharashka gaariga korontada ee la deggan yahay
Halkan ka baro wax ku saabsan NextZero Heat Pump Program.
Si aad wax badan uga ogaato waxa ay magaalo kasta NextZero hadda bixiso, fadlan booqo https://nextzero.org/.
* Macaamiisha Peabody Municipal Light Plant (PMLP), fadlan wac 978-531-5975 si aad jadwal ugu sameyso xisaabinta tamarta guriga.
Foomka Xiriirka Qiimeynta Tamarta Guriga
1-844-403-7960wuxuu furayaa wacdi taleefan *
Horumarinta hufnaanta tamarta guriga ee xaqa u leh waxaa ka mid noqon kara:
Riix halkan si aad wax uga ogaato bumbooyin kuleyleedka Isha Hawada!
1-866-527-7283wuxuu furayaa wacdi taleefan
Mass Save waxay bixisaa qiimeyn tamarta guriga ah oo aan qiimo laheyn si ay uga caawiso milkiileyaasha guryaha inay horumar ka sameeyaan guriga oo keydiya lacagta, korontada iyo shidaalka kululaynta. CET waxay ku qabataa adeegyada Mass Mass ee tamarta Berkshire Gas ee Galbeedka Massachusetts. Khabiirkeena waxay ku furantahay daaqad cusubShaqaale shahaadada BPI haysta ayaa kaa caawin doona inaad aqoonsato oo aad mudnaanta siiso hagaajinta qiimaha-ku-ool ah ee gurigaaga waxayna kugu wargelin doontaa dib-u-soo-celinta iyo dhiirrigelinta si looga dhigo mid la awoodi karo. Ka dhigista gurigaaga mid tamar-ku-ool ah waa ka sahlan tahay sidii hore iyadoo dhiirrigelin weyn laga helo Mass Save:
Ku keydi ilaa $ 2,000 kor u qaadista tamarta guriga sida kuleylka iyo daboolka hawada
Deyn dulsaar ah%% Deyn (illaa $ 0 - eeg waxay ku furantahay daaqad cusubMassSave.com dalabyada ugu dambeeyay)
Milkiileyaasha guryaha ee u qalma amaahda waxay maalgelin karaan casriyaynta lagu taliyay sida daboolka, daboolka hawada, kuleylka waxtarka badan iyo nidaamyada biyaha kulul, daaqadaha iyo qoraxda biyaha kulul. Tallaabada ugu horreysa ee aad ugu qalanto dhiirigelinta ayaa ah inaad iska diiwaangeliso qiimeynta tamarta guriga ee aan lacag la'aan ku bixin.
Haddii aad awooddaada jabineyso ama aad rakibayso nidaamkaaga PV, xulashooyinka tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay ku tallaabsanayaan horumar ballaaran si loo yareeyo raadadka kaarboonkaaga.
waxay ku furantahay daaqad cusubKu wad Green- Hel baabuur koronto jaban
waxay ku furantahay daaqad cusubBiil korontada biilkaaga - Samee koronto cagaaran oo badal fudud
NAGALA SOO XIRIIR tamarta la cusboonaysiin karo:
Wac / Qoraal: 413-341-0418wuxuu furayaa wacdi taleefan E-mail: waxay ku furantahay daaqad cusubcet@cetonline.org
Dhammaan guryaha waxay noqon karaan kuwo tamarta waxtar badan oo raaxo leh. Ka dhigista gurigaaga mid waxtar leh waxay sidoo kale kuu badbaadin doontaa lacag biilka korontada ah bil kasta!
waxay ku furantahay daaqad cusubTalooyinka Cimilada
Jadwal u samee Qiimeynta Tamarta Guriga
CET waxay caawisaa dhismaha iyo naqshadeynta xirfadleyda naqshadeynta iyo dhisida guryaha iyo dhismayaasha qoysaska badan ee buuxiya heerarka maanta lagu jaangooyo waxqabadka. Baro wax badan oo ku saabsan sida aan kuu caawin karno.
waxay ku furantahay daaqad cusubAdeegyada Dhisida Waxqabadka Sare
Badbaadinta Badbaadinta, NYSERDA, Tamarta CT
waxay ku furantahay daaqad cusubNoocyada Mashruuca
Dhismayaasha aan daganeyn
Nala soo xiriir annaga oo ku saabsan Dhismaha Waxqabadka Sare:
Wac / Qoraal: 888-452-8805wuxuu furayaa wacdi taleefan E-mail: waxay ku furantahay daaqad cusubcet@cetonline.org